यो यस्तो अनौठो ठाउँ जहाँ ६–७ वर्षको उमेरमा सहवासका लागि तालिम दिईन्छ ! – Namaste Host
March 6, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on यो यस्तो अनौठो ठाउँ जहाँ ६–७ वर्षको उमेरमा सहवासका लागि तालिम दिईन्छ !
तपाईंलाई अचम्मका लाग्ला कि एउटा जनजाती यस्तो पनि छ जहाँका ६–७ बर्ष उमेरका बालबच्चाले स म्भोग ग’र्न थाल्छन् । पपुआ न्यू गिनीमा बस्ने ट्रोबियान्ड जनजातीको समूदायमा यस्तो प्रचलन छ । यतिमात्र होइन, ११–१२ वर्ष भएपछि यहाँका बच्चाहरुको विवाह पनि भइसक्छ । अझ अचम्मको कुरा के छ भने यहाँका बच्चाहरुलाई शा’रि’रि’क स’म्ब’न्ध बनाउनका लागि तालिम पनि दिइन्छ । शा’रि’रि’क स’म्ब’न्ध बनाउनका लागि बालक र बालिकाको छनोट दुबैका आमा–बुवाले आपसी सहमतीमा गर्छन् । जुन बालक र बालिकाबिच शा’रि’रि’क स’म्ब’न्ध भएको छ, उनीहरु बिच नै विवाह गराइन्छ ।
यद्यपी, बालक बालिकाको आपसी सहमती भए उनीहरुले आफ्नो पार्टनर पनि परिवर्तन गर्न सक्छन् । अर्थात्, यहाँका बच्चाहरु खेल्ने कुद्नेमा नभई शा’रि’रि’क स’म्ब’न्ध’मा लु’प्त हुन्छन् । ११ –१२ वर्ष पुग्नेबित्तिकै स’म्ब’न्धमा रहँदै आएका बालरबालिकाको विवाह हुन्छ । यहाँ यस्तो परम्परा वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । बच्चाहरु कम उमेरमा नै परिपक्क होउन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको त्यहाँका समूदायले बताएका छन् । २० वर्षको उमेर पुगुञ्जेल उनीहरुको चार पाँचजना बच्चा भइसकेको हुन्छ । साथै यहाँका बच्चाहरुलाई कम उमेरमा नै क’ठिन शा’रि’रि’क प’रिश्रम पनि गराउँछन् ।
ट्रोबियान्ड जनजातीको विवाहसँग जोडिएको अचम्मको नियमले उनीहरुलाई अरु जनजातीभन्दा भिन्न गराएको छ । विवाहभन्दा पहिले बालिकाले आफूलाई मनपरेको बालकको घरमा रा’त बिताउन सक्नेछिन् तर बिहान उनी घर फर्कनुपर्ने हुन्छ । बिहान बालिकाकी आमा आफैं ती जोडीलाई खानेकुरा लिएर बालकको घरमा आउँछिन् त्यसपछि आफ्नी छोरीलाई लिएर जान्छिन् । यस्तैगरी, विवाहको एक वर्षसम्म उनीहरु सँगै बस्न सक्छन् । त्यसपछि भने यदि उनीहरु छुट्टिन चाहन्छन् भने उनीहरुले यसो गर्न सक्छन् । अर्थात्, विवाह भएको एक वर्षपछि उनीहरुले आफूलाई मनपरेको मानिससँग शा’रि’रि’क स’म्ब’न्ध बनाउन सक्छन् ।
अझ अचम्मको कुरा के छ भने यदि युवतीले बच्चालाई जन्म दिन्छिन् भने उनले जसरी पनि आफ्नो श्रीमानको घर छोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि यदि महिला चाहन्छिन् भने उनले आफूलाई मनपरेको पुरुषसँग बस्न सक्छिन् । यसरी यहाँ आफ्नो मर्जीले पुरुष र महिला दुबैले कसैसँग पनि शा’रि’रि’क स’म्ब’न्ध बनाउने अनुमती पाएका हुन्छन् । यसैकारण यो आइल्याण्डलाई ‘फ्रि लभ क’म्युनिटी’ भनिन्छ ।
पपुआ न्यू गिनीको ‘मिलने’ खाडीमा बस्ने यो जनजातीको संख्या करिब १२ हजार छ । यहाँ अहिले पनि जनजातीको नै नियम चल्दछ । यो संसारभरीका अन्य जनजातीभन्दा निकै भिन्न छन् भन्न सकिन्छ । उनीहरुको जीवनयापन खेती–किसानी, पशुपालन र शि’का’रले चलेको छ । उनीहरुको भाषा पनि भिन्न छ । बाहिरी संसारका निकै कम मानिसले मात्र उनीहरुको भाषा बुझ्छन् ।
तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवा स्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं! अन्यथा अनि स्ट हुनेछ !
गीता भित्र छ, जीवन जिउने र बुझ्ने सही सार, पढ्नुहोस् केही अंश